Howlgal Muqdisho Ka socday Oo qaab Qabiil isku Badalay Iyo Farmaajo oo Lagu eedeeyey in uu Hawiye hub ka dhigaayo | Xaqiiqonews
Howlgal Muqdisho Ka socday Oo qaab Qabiil isku Badalay Iyo Farmaajo oo Lagu eedeeyey in uu Hawiye hub ka dhigaayo
Dowladda Soomaaliya ayaa Ciidamadii ugu badnaa xalay soo dhoobtay degmooyinka Hodan,Wadajir iyo Dharkeynley kuwaas oo wata gawaarida dagaalka.
Ciidamadan ayaa lagu arkay Isgoyska KM4, Danwadaagta, Korontada ilaa iyo Xoosh, waxeyna gawaaridooda Ciidanka ku gooyeen isgoysyada ay ku sugaanyeen.
Ciidamadan ayaa isugu jiray Nabad Sugid iyo tiro yar oo Boolis ah, waxeyna qeyb ka ahaayeen howlgalka dowladda ay ugu magac dartay xasilinta Caasimada ee Muqdisho ka socda.
Ciidanka Milatariga Soomaaliya oo intooda ugu badan ka soo jeeda beesha Hawiye ayaa Xalay iska diiday iney qeyb ka noqdaan howlgalka Muqdisho ka socda, iyagoona sheegay ineysan ka sii mid ahaaneynin dadaalada Dowladda ay ku dooneyso iney hubka uga uruuriso Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo masuuliyiinta horay xilalka usoo qabtay sida ay hadalka u dhigeen.
Saraakiil kamid ah Ciidanka Milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in Dowladda ay ka weecisay hadafkii laga lahaa howlgalka Xasilinta Caasimada ee ahaa in Shabaab laga saaro Muqdisho, lana waayo dilal ka dhaca Caasimada.
Milatariga Soomaaliya ayaa ku doodaya ineysan xiligan suura gal eheyn in masuuliyiintii dowladda xilalka usoo qabtay iyo kuwa hada hayaba Hubka laga uruuriyo iyadoo Kooxaha ka soo horjeeda Dowladda ay Muqdisho ku dhex hubeysanyihiin.
Ujeedka ka danbeysa Ciidankii Xalay la soo dhoobay Degmooyinka qaar ee Muqdisho ayaa ahaa sidii weerar loogu qaadi lahaa Gudoomiyihii Hore ee Degmada Wadajir Axmed Xasan Cadoow Daaci oo hub fara badan Wadajir ku heysta.
Siyaasiyiinta qaar ayaa ku doodaya in Dowladda fashil ka soo wajaheyso qorshaha ay haatan wado, maadaama ay mucaarado kala hor iman doonaan dadka ay hubka dhigista ku sameyneyso.